दूधको साक्षी बिरालो – NepalayaNews.com
दूधको साक्षी बिरालो
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निहीत स्वार्थ र मनपरी तन्त्रका कारण नेपालको भविष्य झन् अन्धकार हुँदै छ । अस्थिरता र आतंक सिर्जना गरेर जसरी पनि कमाउ धन्धामा लागेका उनीहरुलाई देश र जनताको बारेमा पटक्कै चिन्ता छैन । जालझेलको राजनीति गर्ने र आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्ने उनीहरुका कारण सर्वत्र अन्योल,अस्तव्यस्त र भताभुंग अवस्था बनेको छ । प्रचण्ड र देउवाको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका कारण विभिन्न आयोग, निकाय,संस्थान तथा निगम चरम विवादमा परेका छन् । अहिले त प्रचण्ड भन्दा पनि देउवा शक्तिशाली जस्तै देखिएका छन् । उनी सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । उनको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने वाध्यता छ । यही वाध्यताका कारण उनको दबाबमा गरिएका थुप्रै विवादास्पद नियुक्तिहरुले मुलुककै छवि धमिलिन र धराशायी हुन थालेको छ । अहिले सर्वत्र देउवा आतंक छ । उनको आतंकले मुलुक नै त्रस्त बनेको छ ।
प्रचण्डसँग अपवित्र गठबन्धन गरेका देउवाले सत्ताको लगाम हातमा लिएर सर्वशत्तिमान बनेपछि उनले सारा नियम कानुनको बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले विभिन्न ठाउँमा विवादस्पद छवि भएका भ्रष्टचारी आरोपीलाई धमाधम नियुक्ति गर्न वाध्य पारेका छन् । उनका अगाडि अहिले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायतका मन्त्रीहरु निरीह बनेका छन् । उनको आदेशलाई मान्न मन्त्रीहरु वाध्य छन् । उनको आदेश नमाने कारबाही गर्ने, हटाउने धम्की दिन्छन् । बरियता विवादमा राजीनामा दिन तयार भएका निधिलाई देउवाको ठाडो आदेशले रोकेका छन् । निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । तर पनि देउवासामु निरीह बनेका छन् ।
देउवाले जहाँ जहाँ आफ्ना मान्छलाई नियुक्ति गर्न वाध्य पारेका छन् ती मान्छेहरु चरम विवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उनको छवि पार्टीभित्र पनि राम्रो छैन । पार्टीमा पनि आफ्ना मान्छे र क्षेत्रीयतालाईमात्र काखी च्याप्ने र विरोधीलाई पाखा लगाउने नीति लिएका देउवाले अहिले सरकारलाई पनि आफ्नो ईशारमा नचाइरहेका छन् । प्रचण्ड पनि नाचिरहेका छन् । उनका कारण मुलुक नै अर्को दुर्घटनामा जाने खतरा बढेको छ ।
अहिले चुनाव गराए जनमत एमालेको पक्षमा जाने देखिएपछि भित्रभित्र देउवा र प्रचण्डले चुनाव चाहेका छैनन् । मधेसी मोर्चालाई देखाएर चुनाव पर सार्दै छन् । यो अर्को मुलुक डुबाउने राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । देउवा र प्रचण्ड किन यस्तो षडयन्त्रमा संलग्न छन् ? रहस्यको विषय बन्दै छ ।
नियम काुनन, वरिष्ठतालाई धोती लगाईदिएर सरकारबाट हट्ने सम्मको धम्की दिई प्रचण्ड र निधिलाई वाध्य पारी तेस्रो वरियाताका विवादमा मुछिएका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन बाध्य परे । सो प्रकरण सर्वोच्चमा पुग्यो र सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति खारेज गरिदियो । बरिष्ठतम र योग्यतम नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन अदालतले आदेश दियो तर यो आदेशलाई प्रचण्ड र देउवा दुवैले मानेनन् । अहिले रातारात प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाइएको छ । सिलवाल फेरि सर्वोच्च पुगेका छन् । यो प्रकरणले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी चरम राजनीतिको शिकार बनेको छ ।
आईजीपी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै देउवाले फेरि नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तक्षेप गरे । उनका अगाडि पर्यटनमन्त्री निरीह बन्दै चरम विवादस्पद छवि बनाएका भ्रष्टाचारमा आरोपित निगमका पूर्वनिर्देशक अच्युतराज पहाडीलाई विज्ञका रुपमा चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरे । विगतमा विमानका पार्टपूर्जा र पाङ्गासमेत बेचर खाई निगमलाई धराशायी बनाउने पहाडीको पुनरागमनले भर्खर सुधारउन्मुख भएको निगमको भविष्यको भविष्य पुनः अन्धकार बन्ने चिन्ता निगम कर्मचारीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रचण्डले पनि नाटक देखाइरहेका छन् । दिनमा दसौँ पटक कुरा फेर्ने,जे मन लाग्यो त्यही गर्ने उनको बानीले सर्वत्र शंका बढेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक सोच र काम भएको छैन । लाज कत्ति पनि नमान्ने,नैतिकताविहीन उनले एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्म गर्न सकेनन् । कार्यभारसमेत नदिई चीनको लज्जास्पद भ्रमण गरी नेपालको बेइज्जत गरे तर पनि उनलाई लाजसरम छैन । जे गरेँ राम्रै गरे भन्छन् ।
सर्वत्र विरोध भएपछि संसद्बाट पास हुने अवस्था नभएपछि ५ नं. प्रदेश टुक्राउने संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिए र फेरि अर्को विधेयक दर्ता गराएका छन् । यो पछिल्लो विवादास्पद विधेयकको पनि विरोध भएको छ । तैपनि यो विधेयक एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा ल्याएको भनेर दिउँसै रात पार्ने काम गरे । तर मधेसी मोर्चाले संसद् नै बहिष्कार गर्दै स्थानीय चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि उनको झूठ छताछुल्ल भयो । तर पनि उनलाई कत्ति पनि लाज छैन । उनी यही विधेयकको नाममा सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् । तर देउवालाई हतार भइसकेको छ प्रधानमन्त्री खान । दुवै दूधको साक्षी बिरालो जस्तै छन् । उनीहरुको चरित्र र व्यवहार नेपालका लागि अभिशाप सिद्ध भएको छ । प्रचण्डले पनि देश र जनताको हितममा केही गरेनन् अब देउवाको हातमा सत्ता सुम्पे मुलुक अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसैले नयाँ विकल्प खोजौँ र नेपाल जोगाऔँ ।
अमेरिकाकी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले प्रार्थना सभामा लगाइन् प्रबल गुरुङले डिजाइन गरेको लङकोट ५ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:२१
अमेरिकामा पहिलो संक्रमित भेटिएको ठिक एक वर्षपछि बिरामीको संख्या २.५ करोड पुग्यो, ३६५ दिनमा ४.१५ लाखको मृत्यु ५ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:२१
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसको अन्तिम दिनमा चार परम्परा तोडे, निभाए एउटा मात्रै ५ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:२१